Ra’iisul Wasaare khayre oo kulamo la qaatay Odayaasha ka shaqeeya xoojinta nabadda iyo xasiloonida Gaalkacyo – Radio Daljir
Luulyo 12, 2019 4:06 g 0
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa magaalada Gaalkacyo kulamo kula qaatay odayaasha u xil saaran adkeynta nabadda iyo is-dhex galka bulshada ku nool waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug.
Kulamada dhex maray Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo odayaasha labada qayb ee magaalada ugu xil saaran xoojinta nabadaynta ayaa looga hadlay dowrka odayaasha ee dib-u-heshiisiinta, nabadaynta iyo sare u qaadidda is-dehx galka bulshada.
Odayaasha ayaa Ra’iisul Wasaaraha uga mahad celiyay dadaallada uu ku bixinayo nabadaynta, dib-u-heshiisiinta iyo isu dumidda bulshada, waxa ayna u ballan qaadeen in ay dowladda federaalka Soomaaliya ku garab siinayaan ka shaqeynta danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaare Xasan Cali Khayre oo odayaasha uu kulamada la qaatay u caddeeyay in dowladdu garaawsantahay dowrkooda midnimada iyo nabadda magaalada ayaa ballan qaaday in dowladdu labada dhinac kala shaqeynayso nabadaynta iyo horumarinta xasiloonnida deegaanka.
Maalin ka hor ayaa Ra’iisul Wasaaruhu Gaalkacyo ka dhagax dhigay Hoyga Nabadda oo qayb ka ah mashuurca nabadaynta magaalada Gaalkacyo si loo horumariyo nabadda iyo xasiloonida deegaan, looguna gogol xaaro horumar ballaan oo ay ku tillaabsadaan bulshada deegaanka ku nool.
Qarax ismidaamin ah oo ka dhacay Magaaladda Kismaayo